Ogaden News Agency (ONA) – Faalo: Barnaamijki Ilays TV ee sida tooska ah u baxay
Faalo: Barnaamijki Ilays TV ee sida tooska ah u baxay
Barnamij xiiso badan oo caawa ka baxay Ilays TV xaruntiisa Norwey ayaa looga hadlay dhibaatooyinka tacadi ee ka jira Ogadeniya. Barnaamijkan oo Khadka teleefanka ay toos ugu soo xidhmeen dad aad u tiro badan waxaa kamid ahaa Xubno isugu jira haween iyo rag oo gumeysiga Ethiopia soo waxyeeleyay.
Waxaana halkaas taariikh aad u qiiro badan ka sheekeysay Gabadh kusugan gudaha ogadeniya oo ka hadashay dhibaatada jidh dilka leh iyo kufsiga loo geystay nafteeda. gabadhaas oo sheegtay inaysan helin wax daawo ah ama dhaqtar ah oo caawiyay islamarkaasna cidna aan u sheegin dhibaatadaas soo gaadhay intii kawarheysay mooyane.
Kufsiga lo geysto haweenka ayaa ah mid aad u daran. Waxaana noloshooda kusoo biira niyad xumo iyo nabar joogta ah oo maskaxdooda kuwaara midaas oo ah halis kasii daran kufsiga.
majiraan ayay tiri gabadhaas cid aan lahadli karno oo aan u sheegan karno dhibaatada nasoo gaadhay. haweenaydan ayaa sheegtay inay ku nooshahay meel ka fog magaaloyinka waaweyn (sida Jig Jiga ookale) islamarkaasna haayadaha Xuquuql insaanka ama ajanabiga ah aysan arkin.
Mudane kamid ahaa xubnaha fadhiyay Studidaha ilays TV ayaa kawarbixiyay sababta ay adduunweynuhu uga aamusanyihiin xadgudubyada lagu hayo haweenka iyo caruurta ogadeniya ama guud ahaanba xasuuqa ka socda dhulka Ogadeniya. Waxa uu sheegay in adduunweynuhu ku habsatay musiibo kale oo lagu magacaabo Argagaxiso sidaas awgeed shucuubta ku hoos jirta gumeysiga mowjadaas ayaa qarisay. Gumeysiga Ethiopia ayaa qandaraas ku qaatay somalia isaga oo caalamka u sheegay in argagaxiso ku jirto somalia. Sidaas awgeed ree galbeedku waxay tagero dhaqaale iyo mid ciidanba siiyaan taliska Ethiopia.
Adduunku wuu ka warhaya dhibaatada ka jirta Ogadeniya waxayna xooga saareen sidii gar-gaar bani aadanimo loo gaadhsiin lahaa oo dhanka cunada ah, Aduunwaynuhu isaga oo ka warhaya tacadiga iyo xasuuqa ka jira halkaas waxa uu door biday in Ethiopia uusan kala hadlin si toos ah balse si hoose uu ugala hadlo sidii isbadal ugu sameyn lahaayeen dhulkaas.
Waxa uuna ku tilmaamay marxalada Ogadeniya ka socota midkii Congo iyo wadamada kale ee aduunka kamidka ah ee xasuuqa laga geystay. halkaas oo markii tacadi loogeysto shacabka wadamada ree galbeedku ay marka hore ka hadlaan gar gaar bani aadanimo iyo waxyaalo aan loo baahneyn midaas oo janais iyo waqti u siisa wadamadaas tacadiga geysanaya inay xasuuq ba’an sii geystaan.
Waxaa kamid ahaa dadkii barnaamijka ka qeyb qaatay qof aan jecelahay innuu da’ahaa oo kasoo hadlay xeryaha qaxootiga Kenya. waxa uuna ku waaniyay shacabka Ogadeniya inaysan qof kale waxba ka sugin ay iyagu isku tashadaan dadkoodana wax u qabtaan.
Odeygaas ayaa si toos ah fariimo ugu faray shacabweynaha Ogadeniya ee ku nool Mareykanka iyo Europe waxa uuna ka codsaday in dadkooda dhibaateysan garab istaagaan. Islamarkaasna halgan adag u diyaar garoobaan ama kusoo biiraan halganka loogu jiro xoriyada Ogadeniya.
Barnaamijka oo ahaa mid xiiso badan oo aan laga dhargeyn waxa uu qiimi badan kusii lahaa shucuurta shacabka daawanayay iyo kuwa ka qeyb galayba markii ay maqleen haween dhibanayaal ah oo markii u horeysay si toos ah u sheegaya dhibaatada ba’an ee naftooda loo geystay.
Barnaamijkan ayaa waxa toos u daawaday kumanaan shaqsi oo kusgan shanta qaaradood.
waguul usohoyatay halganka ogadenya gar.ahan bahda warfafinta
Maxamed doollo says: